Toro-kevitry ny tetik'asa fanaraha-maso avy amin'ny Expert Expert
Ny sary tsy dia tsara loatra dia mety hitarika ho amin'ny voka-dratsiny mifandraika amin'ny fanatontosana tranonkala iray. Amin'ny ankabeazan'ny trangan-javatra rehefa mandeha be ny haavon'ny tranonkalanao, ny sary "tsy voasafina" dia mitondra ny ampahany betsaka amin'ny hadisoana. Ny tontolontsika amin'izao fotoana izao dia manavaka ny fifaninanana amin'ny tonta amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny. Izany no antony mahatonga ireo tranokala mitomandavana tsy mahavita mamelona ny hafanana.
Jason Adler, Semalt Mpitarika Success Manager, dia mampitandrina fa raha misy mpampiasa mitsidika ny tranonkalanao ary mahatsapa fa mandeha iray segondra lavitra noho izay efa nampiasainy izy, dia tena azo inoana fa hitsambikina izy ireo ho an'ny tranonkalan'ny mpifaninana aminao raha toa ka mihitatra haingana kokoa - ip route list mikrotik download.
Ahoana no ahazoanao antoka fa tsy mampihena ny tranokalanao ny sary nataonao?
Eritrereto ny fampiasana ireo toro-hevitra sarisary fito ireo mba hanatsarana ny SEO:
1. Ampiasao sary nalaina sary tsara tarehy
Ity dia fahamarinana fototra izay mihatra amin'ny votoatin'ny tranonkala rehetra. Mila ny sary sy tokana tena miavaka ianao ao amin'ny tranokalanao raha tadiavinao ny fananana traikefa tsara kokoa. Raha azonao atao ny maka sary miaraka amin'ny fakantsary tsara kalitao na mahazo mpanaingo izay afaka mamorona sary nalaina, ny tsikombakomba tsaratsara kokoa ny tranonkalanao dia tokony ho laharam-pahamehana.
Ny fakam-panahy hampiasa ny sarimihetsika dia mety ho tsara lavitra. Na izany aza, tsy te hanana saripika manana tranokala an-tapitrisany hafa ianao.
2. Amboary ny sary miaraka amin'ny fitaovana
Ireo mpampiasa toa ny sary izay tsy manintona fotsiny ihany fa koa ny manokana. Ny fitaovam-pandrafetana an-tsary dia miely manerana ny aterineto. Afaka mahita fitaovana mety ianao mba hanampiana zavatra amin'ny saryo alohan'ny hamoahana azy ireo amin'ny aterineto.
Na tianao hampidirana lahatsoratra, ny maha-tokana, ny toetranao na ny fampitomboana ny fangatahany, dia misy fitaovana ho an'izany. Ampiasao ny fitaovana fanontana sary hamoronana sary izay misongadina sy manome ny toerana misy anao.
3. Ireo anaran-drakitra manan-danja
Ny fanao tsara indrindra amin'ny SEO dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fampidirana ireo teny manan-danja amin'ny anaran'ny rakitra mamaritra ny sary. Ny anaran'ny solonanarana toy izao dia mampahafantatra
4. Ampihenao ny haben'ny saryo
Azonao atao ny mampihena ny haben'ilay rakitra kanefa tsy mampihena ny kalitaon'ny sary. Amin'ny fametrahana sary sy famakivanana sary dia afaka manatsara ny haavon'ny tranonkala ianao.
Ampiasao ny endri-tsoratry ny "Save for Web" an'ny Adobe Photoshop mba hahazoana antoka fa ny sary izay miafina ao amin'ny tranokalanao dia tsara indrindra.
5. Ampiasao ny format malalaka
Misy karazana sary telo mahazatra: JPEG, PNG, ary GIF.
JPEG no endrika malaza indrindra satria mitazona sary kely izy io. Ny GIF dia ampiasaina amin'ny animation sy ny zavakanto tsotra. Manohana ny fiarahamonina mangarahara izy ary noho izany dia tonga lafatra ho an'ny orinasa logos sy ireo singa ao amin'ny tranokala hafa. Ny PNG dia fomba hafa maoderina kokoa amin'ny JPEG sy GIF. Ity format ity dia manohana ny mangarahara, manana fanitsiana gamma mandeha amin'ny ordinatera, ary loko tsara kokoa.
6. Hamarino ny soratra sy ny lohateniny
Ny lahatsoratra sy ny lohatenin'ny sary iray dia tokony noforonina araka ny tokony ho izy mba hanampiana ny tranokalanao hahatratra ny laharana ambony amin'ny SERPs ary hanomezana traikefa ny mpampiasa.
Ny soratra amin'ny alàlan'ny soratra dia mety fomba tsara indrindra ahazoana antoka fa hiseho ao amin'ny tranonkala Google sy ny fikarohana ny vokatrao.
7. Mamorona sary sitemaps ho an'ny tranokalanao
Mendrika ny hanaovana ezaka ny fanatsarana sary ho an'ny SEO. Mora kokoa ny tranokalanao ary afaka mahazo izay tadiaviny haingana ireo mpitsidika. Ny tranonkala miadana dia miaritra ny fahaverezan'ny fahitana, ny fihenan'ny sivana ary ny fivarotana sy ny vola miditra. Ireo torohevitra etsy ambony ireo dia hanampy anao hisoroka ireo fahavoazana ireo.